android ဖုန်းများအတွက်ကင်မရာ Flash ကို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကင်မရာက Flash
ကင်မရာက Flash APK ကို
ကင်မရာနှင့် flash ကိုမပါဘဲ device များအတွက်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါကင်မရာက Flash အလင်း app ကို
စမတ်ကင်မရာ Flash ကိုအလင်းနှင့်အတူအမြန်ဆုံး startup စမတ်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုသင့်ရဲ့ Android device ကိုများအတွက်နည်းပညာ LED ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်: interfaces သူတို့ကိုအသုံးပြုသူဖော်ရွေစေအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြီးစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
အစွမ်းထက်နှင့်တောက်ပ: ကင်မရာ၏ flash ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအစွမ်းထက်သည့် LED အလင်း၏ထုတ်ပေးရေးအလွန်အမင်းတောက်ပခွင့်ပြုသဖြင့်, အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများ 3D mode ကိုဖလက်ရှမီးများအတွက်ပါဝငျအသုံးပြုမှုအနေနဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုကတဆင့်ထုတ်လွှတ်အလင်းပမာဏကိုနှစ်ဆတိုး။
စမတ်: ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုလျော့ချဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့အသိဉာဏ်လမ်းအတွက်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း၏အာရုံခံသုံးပြီးနှင့်သက်ဝင်သည့် ECO mode ကိုသေးစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေ!
စွယ်စုံ: ကအလိုအလျှောက်အလငျး၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ Android device ကို၏မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်သော compatibility mode ကိုသက်ဝင်စေပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမကကင်မရာဒါမှမဟုတ် flash နှင့်အတူပင် devices တွေကိုဒီမီးရှူးတိုင်အလင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Android device ကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအပေါ်အာရုံခံကိရိယာ၏အဆိုအရနည်းလမ်းများစွာတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်:
- ဖလက်ရှမီး 3D: ကင်မရာ flash ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်ကနေအလင်းဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီးပါစေ! (ဒီ mode ကိုအသုံးပြုမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သော့ပွင့်သည်)
- စမတ်ကင်မရာက Flash အလင်း LED: အနိမ့်ကျထရီသုံးစွဲမှုကြောင့်စွမ်းအင်ကိုချွေတာဘို့ optimized algorithms မှ
- မြူးကြွလှုပ်ရှားဖို့ဖလက်ရှမီး Shake: အမီးရှူးတိုင်အလင်း၏အလင်းရောင်ခွင့်ပြုကြောင်းအယ်လ်အီးဒီ၏ဘက်ထရီစွမ်းအင်များကိုပေးစွမ်းသင့်ရဲ့ device လှုပ်
- စမတ်အလင်း: အလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသင့်ဝန်းကျင်ရှိအလင်း၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျှောက်ဖွင့်
- strobing light: သင်နိုက်ကလပ်ဖြစ်လျှင်အဖြစ်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာဖူး
- ရဲတပ်ဖွဲ့ဖန်သားပြင်: ပျော်စရာဟာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်လှည့်တူအောင်ဖန်တီးရန်
- မျက်နှာပြင်အလင်း: ရိုးရှင်းသောပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့, မျက်နှာပြင်အားဖြင့်ထုတ်လွှတ်တဲ့တောက်ပတဲ့အလင်း
ကို Android စျေးကွက်အပေါ်ရိုးရှင်းစွာအကိုအကောင်းဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကို။
စမတ်လျင်မြန်စွာ Eco ဖလက်ရှမီး app ကိုကင်မရာ Flash ကိုတပ်ဆင်ပြီးခံရ
Eco ဖလက်ရှမီးကင်မရာ Flash ကိုအလင်း၏ဤဗားရှင်းတတိယပါတီကြော်ငြာများပါဝင်သည်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအဖတ်ရှုပါ။
အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး App ကိုအခမဲ့
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2015 မှာ 12: 08 ညနေ